बिहेको ३ दिनमै नेहा किन रिसाइन्! रोहनप्रीतले मागे माफी – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /International/बिहेको ३ दिनमै नेहा किन रिसाइन्! रोहनप्रीतले मागे माफी
एजेन्सी । बलिउड गायिका नेहा कक्कड मिडियामा छाइरहने नाम हो । उनका यस्ता कृयाकलाप गर्छिन जसका कारण उनी मिडियामा छाइरहन्छीन् । उनले रोहप्रीतसंग विवाह गर्नु अघि सार्वजनिक गर्न लागेको एउटा म्युजिक भिडियोका कारण पनि धेरै दिन मिडियामा छाइरहिन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनले सो भिडियो सार्वजनिक गर्नु अघि निकै संकेत गर्दै तस्बिर सार्वजनिक गरिन् । जसका कारण उनका फ्यानहरुले नेहाले वास्तवमै विवाह गर्न लागेको हो वा उनीहरुको गीत एल्बम मात्र सार्वजनिक हुन लागेको हो भनेर अन्यौलमा परे । तर अन्तत उनले रोहनप्रीत सिंहसंग विवाह गरेकी छन् । उनीहरुले २४ अक्टुबरमा बिहे गरेका हुन्।
विवाह पछि नेहाले खुसी साट्दै केही स्टाटस र तस्बिर सार्वजनिक गरिन् । ‘तिमीलाई थाहा छ नेहार्ट, तिम्रो नेहु सबैभन्दा खुसी दुलही हो र यो सबै मिस्टर सिंहको कारणले हो, धन्यवाद भगवान,’ नेहाले भावुक हुँदै यस्तो स्टाटस लेखेकी छन् । उनले रोहनप्रितसँग भेट गराएको भन्दै भगवानलाई धन्यवाद भनेकी छन्।
यो सँगसँगै नेहाले इन्टाग्राममा गरेको एउटा पोष्टले बलिउडमा चर्चा भएको छ । उनले अनपेक्षित रुपमा राखेको एउटा संकेतले चर्चा पाएको हो ।रोहन प्रीतको एउटा तस्विर शेयर गर्दै रिसाएको स्टीकर हालेर उनले सार्वजनिक गरेपछि नेहाका फ्यानहरु फेरी निराश बनेका हुन् । त्यस्को लगत्तै रोहनप्रीतले उनलाई फकाएर कमेन्ट गरेको देख्न सकिन्छ ।
​लामो समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दै वरुण धवन
नायिका दीपिका पादुकोणको आज जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
अस्पतालमा भीषण आगलागी, १० जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसक्यो
अमेरिकामा ७.८ म्याग्‍निच्यूडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी